२०७९ बैशाख १६ शुक्रबार ०७:३७:००
सरकारले तत्काल कोभिडविरुद्धको थप खोप खरिद नगर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले मौज्दात खोप बढी देखिएको र नियमित रूपमा लगाउनेको संख्या न्यून हुँदै गएकाले तत्काल थप खोप खरिद नगर्ने जानकारी दिए ।
डा. रोशन पोखरेल, सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
मौज्दात खोप बढी देखिएको र नियमित रूपमा लगाउनेको संख्या न्यून हुँदै गएकाले तत्काल थप खोप खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ ।
खोपको मौज्दात धेरै र लगाउने अपेक्षाअनुसार नभएका कारण तत्काल खरिद नगर्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको सचिव पोखरेलले बताए । ‘अहिले भएको खोप लगाइसक्ने र आवश्यकता परेको खण्डमा पछि निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई हाल मौज्दात रहेको खोप समयमा प्रयोग गरिसक्न निकै चुनौती देखिएको छ । खोपको मौज्दात धेरै हुनु र प्रयोग अवधि कम हुनुले पनि समस्या देखिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा प्रयोग भएका खोपको म्याद ६ महिनाभन्दा कम रहेको स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअगाडि निर्णय गरेको पाँचदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाउने फाइजर खोप भने ल्याउने भएको छ । यो उमेरसमूहका बालबालिका खोपको लक्षित समूहभित्र छन् । मन्त्रालयले ६४ लाख मात्रा खोपका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय व्यवस्थापन महाशाखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक करोड १२ लाख ९१ हजार ८८१ मात्रा खोप मौज्दात छ । पछिल्लो समय कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या ज्यादै न्यून छ । बिहीबार एक लाख २५ सय ४३ जनाले खोप लगाएका थिए । जसमध्ये पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या नौ हजार २२ छ ।
महाशाखाका खरिद प्रमुख डा. सुरेन्द्रकुमार चौरासियाका अनुसार पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या करिब–करिब सकिएको छ । लक्षित जनसंख्यामा ९५ दशमलव ३ प्रतिशत नागरिकले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । त्यस्तै, पूर्ण मात्रा खोप लगाउने ८३ दशमलव ७ प्रतिशत छ । तथ्यांकअनुसार चार करोड १५ लाख ५९ हजार ३५५ मात्रा खोप लगाइएको छ । पहिलो मात्रा एक करोड ८८ लाख ९७ हजार ५४२ र पूर्ण खोप एक करोड ९५ लाख ३४ हजार ५३४ जनाले लगाएका छन् । अतिरिक्त खोप लगाउनेको संख्या ३१ लाख २७ हजार २७९ छ ।
कहाँ कति खोप बाँकी ?
प्रदेश १ मा : ५ लाख २५ हजार ५३८
मधेस प्रदेश : ६ लाख ६१ हजार ७७९
हेटौँडा : २ लाख ५३ हजार ४३्
बागमती प्रदेश : ११ लाख ९३ हजार ५५
गण्डकी प्रदेश : १ लाख ३९ हजार ९४५
लुम्बिनी प्रदेश : ३ लाख ४२ हजार ७२०
कर्णाली प्रदेश : १ लाख ६४ हजार ५७१
सुदूरपश्चिम प्रदेश : ८० हजार ४ सय ४
केन्द्रीय स्टोर टेकु : ७९ लाख ३० हजार ८८०
#कोभिड # खोप
कोभिडपछि नेपाल आएका २८१ विद्यार्थी मंगलबार चीन फर्कँदै
भारतमा एकैदिन १७ हजारभन्दा बढीमा कोभिड-१९ संक्रमण
पर्याप्त खोप नहुँदा ललितपुरमा रोकियो कोरोना खोप कार्यक्रम
आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, २६ गते जवाफी बहस
मिटरब्याजी रामदेवविरुद्ध पीडितको प्रदर्शन, कारबाहीको माग गर्दै अदालत परिक्रमा
आफूलाई निष्कासन गर्नेहरूलाई वामदेवले पनि गरे निष्कासन,आत्मालोचना गरे चारजनाको कारबाही फिर्ता हुने